Ihowuliseyili iCompact Ball Valve X9002 uMvelisi kunye noMboneleli | Xushi
Imidiya: AMANZI / I-ACID ENGAKHOYO/ISISEKO ESIBUMTHETHO
Ubungakanani bezibuko: 1/2"-2"
Umgangatho okanye ongekho mgangathweni: umgangatho
Umbala: Imibala emininzi ekhoyo ngokukhetha
Isampulu: Ubonelelwe simahla
Ilogo: Iprintwe okanye yenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha: Ikhathoni, iPolybag, Ibhokisi yoMbala okanye eyenzelwe wena
Isiqinisekiso :ISO9001:2015, SGS, GMC, CNAS
Igama elingundoqo: ivalve yebhola edibeneyo yeplastiki
Okokuqala, nxiba ukumelana; Ngenxa yokuba umbindi wevalve yevalve yebhola eqinileyo yintsimbi yokutshiza, umsesane wokutywina yintsimbi engaphezulu, ngoko ke ivalve yebhola yokutywina ayizukuvelisa kakhulu xa ivuliwe naxa ivaliwe. (Inobunzima obungama-65-70):
Okwesibini, ukusebenza kakuhle kokutywina; Ngenxa yokuba itywina levalve yebhola yokutywina iphantsi ngesandla, ayinakusetyenziswa de undoqo wevalve ungqinelane ngokupheleleyo nomsesane wokutywina. Ngoko ukusebenza kwakhe kokutywinwa kuthembekile.
Isithathu, isibane sokutshintsha; Ngenxa yokuba emazantsi eringi yokutywina yevalve yebhola yokutywina ithatha intwasahlobo ukubamba ngokuqinileyo umsesane wokutywina kunye nesiseko sevalve kunye, ngoko ke iswitshi ilula kakhulu xa amandla angaphandle edlula amandla okuqinisa kwangaphambili entwasahlobo.
Okwesine, ubomi benkonzo ende: isetyenziswe ngokubanzi kwi-petroleum, ishishini lemichiza, ukuveliswa kwamandla, ukwenza iphepha, amandla e-athomu, i-aviation, iirokethi kunye namanye amasebe, kunye nobomi bemihla ngemihla yabantu.
Ivalve yebhola ebambeneyo ilula kunye nesakhiwo esixineneyo, ukutywinwa okuthembekileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, umphezulu wokutywina kunye nengqukuva rhoqo kwindawo evaliweyo, akukho lula ukhukuliseko oluphakathi, ukusebenza lula kunye nokugcinwa, ilungele amanzi, izinyibilikisi, iiasidi kunye nendawo yokusebenza ngokubanzi, njenge igesi yendalo ikakhulu isetyenziselwa ukusika okanye kumgca phakathi, ingasetyenziselwa ukulungisa nokulawula ulwelo.
Ngaphambili: Ivalve yebhabhathane
Okulandelayo: MF Ball Valve X9011